Tag: mmiri ozuzo | Martech Zone
Azụrụ m ụgbọ mmiri ọhụrụ maka ndị ahịa… ọ dịkwa ịtụnanya
Thursday, January 9, 2020 Thursday, January 9, 2020 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, m na-adụ ọdụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkwado ụlọ na ntanetị ha. Anyị wughachiri ma kachasị saịtị ha mma, bido mkpọsa na-aga n'ihu iji jide nyocha, wee bido bipụta ọrụ ha n'ịntanetị. Otu ihe na-efu efu, n'agbanyeghị, dị na mgbe foto nke Njirimara. Site na nbanye na usoro ha na usoro njikwa ọrụ, enwere m ike ịhụ ihe ngwongwo na-emechi na mgbe a na-arụ ọrụ. Mgbe
Ntinye Drone Na-aga Wepu N'oge na-adịghị anya?
Saturday, January 26, 2019 Mọnde, Jenụwarị 28, 2019 Douglas Karr
Nwalee teknụzụ ndị kachasị ọhụrụ bụ akụkụ dị egwu nke ọrụ m. M na-azụtakarị nkà na ụzụ nanị iji nye ya ule ma hụ na m na-aga n'ihu. Ọnwa ole gara aga, azụrụ m DJI Mavic Air, ma jiri ndị ahịa ole na ole nwalee ya. Adịghị m onye na-egwu egwuregwu, yabụ na-acha nchara n ’ime ihe nchịkwa. Mgbe m nwalere ya na ụgbọ elu ole na ole, ọ tụrụ m n'anya otú ngwaọrụ ndị a si efepụ onwe ha. Mmiri ahụ na-apụ na
Drones Ahịa Unmanned
Fraịdee gara aga, mụ na otu enyi m, Bill Hammer nwere mkparịta ụka dị ukwuu. Ọnọdụ ya bụ na ịnwe nnukwu mmefu ego nke ndị agha emeghị ihe ọ bụla ma lie akụ na ụba. Ekwuru m na ndị agha, n'ọtụtụ ụzọ, ha na gọọmentị na-etinye ego na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ na imepụta oke. Aga m agbakwunye na, na azụmahịa nke 'igbu ma ọ bụ gbuo', stakes adịghị elu karịa mgbe ọ bịara